Ikhaya > baqinisekiswa
Ngenisa ubungqina bakho apha
Imveliso yakho yayiyeyona ilungileyo kwaye yenza i-most! Kodwa andicingi ukuba ikhona into enokubuyisa idatha endiyi lost. Ifumene le nto bendisele ndinayo, ebingaphezulu kweemveliso zangaphambili, kodwa akukho nanye kwiiveki ezi-3.5 zedatha eyayilahlekile. Ukuba bendicinga ukuba idatha elahlekileyo ibikhona, ngekhe ndibhatale i-50 yeedola ukuyibuyisa, kwaye KUNGENZEKA ukuba ibe yi-100 leedola ukuba bendinethemba lokuba yonke idatha engekhoyo ibikhona. Kodwa yayingeyiyo, ke yayixabisa i- $ 100.
Unksz Mascha Fujimoto uthathe umhlala-phantsi
Arizona, USA Ngo-Matshi 16, 2021
Inkqubo egqwesileyo, kunye nenkxaso ebalaseleyo yabathengi (phakathi kwenkxaso yabathengi ebalaseleyo endikhe ndayifumana).
Ndisebenzisa i-Outlook 2010 kwikhompyuter yam yokugqibela, eyayisebenzisa iWindows 7. Le khompyuter yafa, nangona ngethamsanqa, bendigcina zonke iifayile zam (kubandakanya iifayile zangaphandle ze-Outlook) kwi-drive yangaphandle. Kodwa ndilibale igama eligqithisiweyo kwifayile ye-pst ebhaliweyo ene-14.5 GB ye-imeyile kunye neziqhotyoshelweyo (malunga neminyaka esixhenxe ye-imeyile, ezinye zazo zibaluleke kakhulu kum).
Ndikhuphele uvavanyo lwetyala lwe DataNumen Outlook Password Recovery (Ungaphazami ngokulungiswa kwe-Outlook okanye ukubuyiswa kwediski ye-Outlook) kunye started inkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, kodwa ndawurhoxisa umsebenzi emva kokuba uqalile ukuze ndikope ikopi ye-pst ebhaliweyo kwindawo eyahlukileyo ukuze ndiqiniseke ukuba ndifumana isipele (ndilibale ukuba sele ndinendawo yogcino esele ikhona kulawulo lweefayile ze-Outlook). Emva koko, andinakuphinda ndisebenzise inguqulelo yolingo kwakhona.
Ndithengile uguqulelo olupheleleyo, kodwa bekungekho ndlela yokuba ndifake i-ID yam yomsebenzisi kunye nekhowudi kuhlobo lokulingwa ngokwemiyalelo yokuguqula inguqulelo yovavanyo ibe kwinguqulelo epheleleyo. Ndathumela imeyile DataNumen. Kwisithuba esimalunga neeyure ezili-12, bandithumelela i-imeyile ngekhonkco lokukhuphela eligcweleyo, kwaye bandiyalela ukuba ndiyikhuphe ingxelo yovavanyo emva koko ndifake ingxelo epheleleyo.
Khange ndibenangxaki ekukhupheleni uvavanyo kunye nokufaka ingxelo epheleleyo (uguqulelo 1.2.1.0), kwaye ngokukhawuleza ndafumana igama lokugqitha ukufikelela kwifayile ye-pst ebhaliweyo.
Ndibaleke ndasebenza kwakhona ukuze ndibone ukuba ithathe ixesha elingakanani. Inkqubo isuse ifayile yam ye-pst ngomzuzu omnye kunye nemizuzwana engama-47.
Ngesiqhelo, ezinye iifayile ze-pst kulawulo lwam lweefayile zangaphandle, ezinje ngeefayile ezigciniweyo, zazingabhalwanga. Andikhumbuli ukuba ndiyifihle njani le fayile ye-pst. Kuya kufuneka usebenzise uhlobo lwetyala (kufuneka ulisebenzise kube kanye) ukuqiniseka ukuba ifayile ye-pst ofuna ukufikelela kuyo ibhalwe ngokufihliweyo.
Okokugqibela ukukhankanya: Andinalwazi lokuba inguqulelo yesilingo iyakucacisa ifayile ye-pst enkulu njengale, nokuba ubungakanani befayile abuchaphazeleki kuhlobo lovavanyo.
Le nkqubo isisindisi sobomi, kwaye inkxaso kubathengi yayiqaqambe (i-10 kwisikali se-1 ukuya kwi-10). Ndisandula ukubuyisa malunga neminyaka esixhenxe ye-imeyile. Akukholeleki!
Seattle, e-USA ngoMatshi 12, 2021
Ngethamsanqa kuwe ngeenkqubo zakho. Bancinci kwaye benza kanye le nto ichaziweyo.
I-interface kulula ukuyilandela kwaye uyiqonde. Ndilinde ezinye iinkqubo ezintsha ezivela kuwe.
UDavid Roper uMlawuli we-IT weSibhedlele esidla umhlala-phantsi
IBlythewood SC, e-USA nge-3 Matshi 2021
UAntonis N. Injineli edla umhlala-phantsi
Patras, eGrisi ngoFebruwari 27, 2021
Enkosi ngoncedo lwakho.
Isicelo sisebenza kakuhle. Isiseko sikulungile.
e-automatyk ul. ILeśna 17C, 62-006 Gruszczyn Ngomhla wamashumi amabini anesithathu, ngo-23
UVíctor Ramón RG Umsebenzi weKhaya
I-Leioa, iBizkaia, iSpain ngoSeptemba 30, 2020
U-Lucy Gold weNzululwazi ethathe umhlala-phantsi
EParis, eFrance ngoSeptemba 21, 2020
I-Texas, e-USA ngo-Septemba 1, 2020
RAR ifayile ye-115 GB: yonakele ngokupheleleyo ...
Inkqubo yakho iyilungisile ngeyure ezingama-5 kunye nemizuzu engama-33 ...
1K enkosi !!
IBorsbeek, eBelgium Agasti 30, 2020
UAlan Rudy Inkululeko Ngokwenene
Ndichithe iiyure ezi-5 namhlanje ndikhangela iwebhusayithi enikezela simahla okanye ngexabiso eliphantsi Ukubuyiswa kwephasiwedi ye-Outlook. Ndade ndayifumana DataNumen ilingane ngokugqibeleleyo ityala lam ngexesha elinye lokusetyenziswa kwam! Kulula ukuyisebenzisa kwaye isebenze njengomtsalane. Enkosi ngokunciphisa iiyure zam zokudana!
IHouston, eTexas, e-US ngoJulayi 15, 2020
UCavan McDonald uthathe umhlala phantsi
IAlbania yaseSt. I-UK kaJulayi 9th, 2020
Eunited Kingdom NgoJuni nge-2, 2020
UPete M. Umhlala phantsi
ICalgary, AB, Canada ngoMeyi 8, 2020
IRomania ngo-Epreli 22nd, 2020
UKen Mantey othathe umhlala-phantsi ngokuKhanya kwe-GE
IChesterland, OH, e-USA nge-8 ka-Agasti, 2019
Zama nje ukubuyiswa kwepassword yakho.
Usebenze kakuhle kakhulu.
Siza kwenza inqaku kwiwebhusayithi yakho kwimeko apho kufuneka sithenge nasiphi na isisombululo osibonelelayo.
Matshi 21st, 2020
EMilan, e-Itali ngoMatshi 16, 2020
Mholo. Ndivavanya isoftware yakho ukulungisa isiseko sedatha. Emva kokusebenzisa izixhobo zakho ngoku ndiyakwazi ukubona yonke idatha yam kwakhona
Enkosi ngoncedo lwakho! Ndichukumisekile yindlela esebenza ngayo le nto.
I-Texas, i-US ngo-Novemba 8, 2019
Enkosi ngesixhobo sakho, iyandinceda ngokupheleleyo ukulungisa ifayile yam ebalaseleyo.
Agasti 19, 2019
UTomasz Warmuz uMlawuli wezoBugcisa uLandis + Gyr Poland Sp. z oo
Poznań, Poland Ngomhla we-20, 2019
Ukubonisana noLuca DM Cogeor
IRoma, i-Itali ngo-Epreli 10, 2020
Asheville, NC ngoMeyi 10, 2019
Ndiyavuyisana nawe ngo-DOER wakho kuphela kwesoftware endizamile ngayo ukubuyisela nayiphi na i-dbx yam eyonakeleyo.
EFrance ngo-Epreli 23, 2019
I-Steve IT yobungcali
EThekwini, eMzantsi Afrika ngoFebruwari 18, 2019
I-Ambernath, e-India ngoJanuwari 15, 2020
UFernando Hernández Cuestas
EMoscow, iRussia ngo-Epreli 29, 2019
URhulumente weNgingqi waseRicardo Freitas
Funchal, EPortugal ngoJulayi 27, 2019
UPeter Keating ex CIO, ngoku uthathe umhlalaphantsi
EMelbourne, e-Australia ngoJulayi 15, 2019
Bohdan Sheretiuk Umhlala-phantsi we-Marketer SS-nkonzo
Lutsk, Ukraine Ngo-Oktobha 27, 2019
I-Abdellatif ye-FAJR Jikelele yezicelo zoShishino
ICasablanca Morocco ngoDisemba 10, 2019
UMandip Kanjiya u-CEO kunye noMsunguli we-Hey Flyer http://www.heyflyer.com/
IAuckland, eNew Zealand ngoFebruwari 18, 2019
Umsebenzisi wekhompyuter kaPeter Jones wasekhaya
Adelaide, Australia NgoJuni 27, 2019
IAuckland, eNew Zealand Agasti 23, 2019
UValentin Bogatu injineli yefiziksi https://helpwithphysics.com
IRomania NgoSeptemba 4, 2019
Kuyafuneka ukubuyisela ifayile yogcino yeWindows XP. Isoftware yakho isebenze ngokumangalisayo ...
Ndiya kucebisa ngokuqinisekileyo!
U-Eric Seeds uMlawuli we-IT CabIilebhu zetekhnoloji www.cabal.com
ENew Brunswick, NJ, e-USA ngoJanuwari 8, 2020
I-Itali ngo-Matshi 7, 2020
Ndiyakucebisa kuye nakubani na ekufuneka ebuyisile Tar ifayile.
IHuntsville, Alabama, e-USA
Imveliso yakho isebenze ngokuchanekileyo.
U-Eugenio G. Bahamondes M.Ss. Injineli yoMbane ePhakamileyo
Iinjineli zeNorTecnica Ltd.Iquique, eChile
Enkosi kakhulu ngokwenza ukuba ingxelo yakho yedemo ifumaneke kubantu abanjalo
njengabadla umhlala-phantsi (endimnye wabo).
UBrian Willis oGuqulelayo kunye nophuhliso lwewebhusayithi
ICarletonville, eMzantsi Afrika
Iinkqubo zikaMohammed Meeran zeDATEL kunye neSoftware FZ LLC
Abacebisi bakaRyan Foote Nexus IT
Okokugqibela-yimveliso eyenza oko ikuthethayo ngendlela ethe tye engenantsingiselo kunye nesiphumo esihle. Wenze kakuhle! Ndinqwenela ukuba ndiyifumene imveliso yakho ngaphambi kokuchitha imali yam kubazenzisi abaninzi phaya.
Umzamo wam wokubuyisela kunye ne-DOER ngoku i-100%.
ENKOSI! Ukulungiswa kunye nokugcinwa kwi-flash drive ngaphambi kokuba ndilahle i-IE kunye ne-OE !!!
Imveliso ebalaseleyo !! Ndandithandabuza kodwa sele ifumene i-backup zip yogcino lwam lwe-imeyile kwaye nditshintshiwe 🙂
ndiyayithanda kwaye ndicinga ukuba ndiza kuyithenga
Umfazi wam wayenza yonke le nto.
Ngombulelo bendinazo zonke iifayile ze-dbx kwi-back-up ukusukela nge-19th ka-Novemba kwaye zonke ezinye zaziseziseva ye-imeyile, ke ndakuba ndilungisiwe, ndatsala ii-imeyile ezingama-95, kodwa ZONKE zazikho.
Ufanele ngokulula ama-50 angamawaka.
enkosi. Imveliso isebenze kakuhle.
Ndisandula ukuthenga kwaye ndisebenzise i-DOER ukubuyisa enye yeefayile zomsebenzisi .dbx ezazingaphezulu kwe-2GB. Isebenze kakuhle-enkosi ngemveliso eluncedo kakhulu.
USteve Forrette MarkeTouch Media
Ndizabalazile ukufumana kwakhona iminyaka emi-4 ye-imeyile kwi-hard drive yam yengozi kwiveki ephelileyo okanye njalo.
Usebenzise ingxelo yedemo ye-DOER-ayenzi ubulungisa obupheleleyo !! Inqaku elipheleleyo lifumene i-100% yeposi yam-yeyiphi into emnandi yesoftware- amaxabiso amahle kakhulu.
Ngaba yinkqubo elungileyo ngokwenene, yokuba abantu abakhuphele iifayile ezinkulu ze-sfx kwi-intanethi eziyingozi ndincoma le software! iyalungisa zip iifayile kunye neefayile ze-sfx zilungile! kodwa ndicinga ukuba le software ifuna ukukwazi ukulungisa rar iifayile nazo 🙁
Enkosi, iyasebenza. Imveliso entle- usindisa ubomi ngokwenene!
Yinkqubo entle kakhulu. Uhlobo "olungenangqondo" endiluthandayo.
Ndingumntu osisiseko sedatha kwaye endaweni yoko ndisebenzisa iFoxpro kunesipredishithi se-Excel.
Kodwa ubomi abuhambi njalo xa usebenza nabanye abantu.
Ukuba inkqubo yakho khange isebenze, mna nomhlobo wam ngendibhenele kulungiso olusebenzayo sisebenzisa i-hex okanye i-ASCII yefayile yokujonga kwaye sasilungisa isandla kanambambili ukulungisa urhwaphilizo. Yintoni erhuqa ngayo.
Ewe ayenzekanga. Ke nditsho umsebenzi olungileyo kwaye ufumana ivoti yam kunye ne-PR yexesha elizayo.
Enkosi kwakhona. Kufanelekile ukuba imali.
URick Fayter uMgcini weDatha
Ngapha koko ndisifumene isisombululo sakho kwimizuzu eli-10 yokuqala!
Ngapha koko nangona ekuqaleni bendicinga ukuba le yimali eninzi yokuchitha kwinkqubo encinci, DataNumen Access Repair siyifumene isiseko sedatha ke ngoku ndonwabile 😉
Nantoni na ekwi-Intanethi
Wow software yakho yabafana iyamangalisa ndikhuphele ngaphandle isoftware yesilingo kwaye ikwazile ukundibonisa zonke iitafile endinazo ngqo. Le sofware yamatye kwaye yandinceda kakhulu.
ine ukulungiswa kakuhle kwangaphambili
Ndithengile DataNumen Outlook Express Repair kwaye ndibuyise ngempumelelo iifayile kwifolda yam ethe ngandlela ithile yanyamalala kuluhlu lwam lwe-OE. Imveliso yakho isebenze kakuhle; enkosi.
Inqaku nje lokwazisa ukuba le nkqubo ingentla isebenze kakuhle kakhulu kwaye ndiphinde ndachacha ngempumeleloost I-imeyile engama-3000 endiyicimileyo ngempazamo. Andiyi kuthandabuza ukucebisa oogxa kunye nabahlobo.
SA Bias Industries Limited zithengiswa kwi-zeedola
Isoftware yakho indincede kakhulu, enkosi enkosi enkosi enkosi kakhulu !!!!!!!!!!
Ndifuna ukukwazisa oko DataNumen DBF Repair ikwazile ukubuyisa yonke idatha kwi-ACT yethu! Isiseko sedatha se-2000.
UStephen Rice uMlawuli weMveliso
Ungathenga okanye uthengise izabelo Sacramento Magazines Corp.
Ndizamile ezinye iimveliso ezintathu ngaphambi kokuba ndifumane kwangaphambili Outlook Express Ukuchacha. Iinkqubo ezimbini zifumene yonke imiyalezo, nangona kunjalo, imiyalezo ibingenayo idatha kwimizimba. Owesithathu akafumananga yonke i-imeyile esele ikho. Inzame yokuqala nge-Advance Outlook Express Ukubuyisela kwakhona kubonise zonke iifayile kulingo. Ndithengile imveliso kwaye wonke umyalezo endifikelele kuwo wafunyanwa kwangoko. Le yimveliso emnandi kwaye ngokuqinisekileyo inexabiso.
UBill Izinwele uMfo wam weKhompyuter
Ndithenge isoftware yakho izolo ukufumana kwakhona i-7GB tar ifayile ebiyincwadi yam yonke "yamaXwebhu kunye neeSetingi" ukusuka kwilaptop yam eya kwinkonzo. Amanye amaxwebhu ayebaluleke kakhulu * njengedatha yam yokuKhawulezisa, ii-invoyisi zeshishini lam, kunye nesishwankathelo sokulungiselela irhafu kwiakhawunti yam.
Inguqulelo ye-freebie ibonakalisile ukuba inokulungisa yonke into endiyiyo lost, ndiye ndathenga kwaye ndayibhalisa isoftware. Xa ndandibaleka, igcine i-Docs_fixed.tar, kwaye ndabaleka *tar xvf * kuyo. Yafa ngeempazamo kwaye yadlula most yemixholo.
Nangona kunjalo, ndaphinda ndayiqhuba tar ukuyalela ngeempikiswano zegama lefayile ukukhupha nje ezo bendinomdla kuzo (yonke "iMali" yam
directory), kwaye ngoThixo, yabenza bonke bakwimeko egqibeleleyo.
Ndifuna nje ukubulela. Enkosi. Enkosi. Enkosi. Enkosi. Enkosi. Ukuba kukho nantoni na endinokukwenza yona kwixa elizayo (iziqhamo zebhasikithi ngeKrisimesi, hlamba imoto yakho, uthathe iimpahla zakho, iimpahla zakho zesondo) Ndinetyala kuwe, kwinkampani yakho nakwisoftware yakho.
Nina bantu niyanyikima.
UKevin Smith uMyili wezoMbane, uMfama, uGqirha, uMculo
Isoftware yeCleanscape yamazwe aphesheya eAlbuquerque, NM, e-USA
Ngendlela, iimveliso zibalaseleyo. Ndishiya umbulelo wam kubafana abaphuhlise izixhobo eziluncedo kangaka.
Bawusombulula ngokwenene umphefumlo wam.
USão paulo, eBrazil
DataNumen Excel Repair ndagcina usuku ndabuya ndafumana idatha endiyifunayo kwifayile yam eyonakeleyo. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, isebenze kakuhle kwiimfuno zam, kwaye ndiyacebisa kakhulu!
E. Madsen oyiNjineli eyiNtloko
I-PIN Technology, Inc. iNew York, NY, e-USA
Enkosi ngokubuyela kum. Oko ndathenga isoftware kwaye ndafumana ikhonkco lokukhuphela isoftware kwangoko. Ndiyifakile kwaye isebenza ngokuqaqambileyo!
UKevin O'Leary FETAC
Ndenze njengoko ubucebisile kwaye kuyasebenza! Enkosi ngokundinceda ndibuyise iminyaka eli-10 yomsebenzi !!
Perth, eNtshona Koloni
Dear DataNumen Abasebenzi
Ndiyabulela ngokwenza "DataNumen PSD Repair"Ndandinomdala omnye
ifayile ebendiyibambile ukusukela ngo-2000. Yenziwe ngo
IfotoDeluxe, kuhlobo lwePDD iFotohop ayinakufunda.
Awunalo nofifi lokuba ndonwabe kangakanani ukujonga kwakhona, ukukhuphela, kwaye ngempumelelo
buyisela isoftware yakho kule fayile enye.
IHorborborough, NJ, eUSA
Ungaze uyifumane ngoku, ikhonkco leza nge-imeyile nayo, kwaye iyasebenza
IMarietta, GA, eUSA
UFredericton, eNew Brunswick Canada
Iinjineli zikaJustin Moss
IMetton America, Inc. IHouston, TX, e-USA
Ndigcine iBacon yam! Enkosi!
IAtlanta, iGeorgia, eMelika
IWoonst BVBA Geraardsbergen, eBelgium
Enkosi ngezimvo zakho.
Unemveliso esemagqabini kwaye ifumene iifayile ezininzi kum.
UArthur J Wehlow UMphathi oBonisa iZisombululo ze-Akhawuntingi
UMark Humphrey umphathi weNethiwekhi
I-CB Richard Ellis Ltd eToronto, Canada
Ndikuthengile namhlanje eyakho Advanced Outlook Express Repair -Siyavuyisana nawe, isebenze ngokumangalisayo!
Ngaphandle kwezinye izinto ezincinci, njenge-shimering log ngexesha lokubuyisa umsebenzi, okanye, ukuyilwa kwemixholo yefayile ye-Inbox dbx kwiifayile ezi-2 ezinelo xesha linye le-imeyile. Ewe, ndacela isoftware ukuba yenze enye ifayile enee-imeyile ezifumanekileyo emva kokufumana ii-imeyile ezingama-2000, kodwa, bendilindele ukufumana iifayile ezi-2 eziphumelelayo ngokubhekisele kwimihla ye-imeyile, hayi izinto ezimangalisayo zeefolda ezi-2 zexesha elifanayo Ixesha le-imeyile!
Kodwa, njengoko benditshilo ngaphambili, zizinto ezincinci ezi, kwaye ngaphezulu kwako konke, ndiyazingca ngomsebenzi owenziwe sisoftware yakho, kwaye ngokuqinisekileyo, ndiza kuwucebisa kubahlobo.
Ndinqwenela impumelelo enkulu ekuphuhliseni nasekudaleni iinkqubo ezinjalo!
Enkosi kakhulu, ngokunyanisekileyo,
Isikhokelo soMoya seYigal
Ndinengxaki kwifayile ye-1.5GB yokukhuphela, bendixinene kodwa i-AODR isombulule umba wam kwaye yandinceda ukuba ndibuyise yonke idatha yam, Enkosi kakhulu Datanumen.com Iqela elindincedileyo ekukhetheni isixhobo esifanelekileyo kwingxaki yam.
Enkosi ngempendulo yakho- luxabisa uncedo lwakho.
Ngokwenyani, ndithenge i-AOER izolo, nayo yonke lost ii-imeyile zafunyanwa !!
I-AOER ibonakala isebenza kakuhle, kwaye kufuneka ilungise zonke iingxaki zam ze-OE!
Ndine lost Ii-imeyile ezibalulekileyo ngexesha lenkqubo yokubumbana kwaye ndingazi ukuba sizifumana njani okanye sizivule kwakhona. Imveliso yakho isombulule ukukhutshwa (ekugqibeleni).
Nangona kunjalo, kuya kufuneka ucacisele ii-ludites ezinje ngam ukuba naziphi na i-BAK fliles zinokuthiywa ngokutsha ngokuba yi-DBX. Umxhasi we-most ifayile engafunekiyo endiyifunayo ibizwa ngokuba yi-BAK (endiqondayo ukuba kungenzeka ukuba yenzekile kwinkqubo yokuthelekisa) kwaye kwandithatha usuku lophando ukwenza ukuba ndikwazi ukutshintsha igama lefayile emva koko ndisebenzise imveliso yakho ukwenza okunye. Nje ukuba ndisebenze ukuba iyasebenza njengokunyanga!
UMichael mitchener mmcreativeshishini
DataNumen Access Repair ifumana kwakhona idatha eninzi kunayo nayiphi na enye imveliso endiyisebenzisileyo. Indincede ndagcina uninzi lweedatha ezonakalisiweyo. Ndonwabile kakhulu ukufumana le mveliso.
UMargaret Messick Costume Izixhobo zoLuhlu
UDavis, CA, e-USA ngoJuni 16, 2015
ISan Diego, CA, e-USA Ngomhla we-15, 2015
Khange ndibenangxaki ngale nkqubo ibalaseleyo. Ilizwi kwabo bantu abanokuba neengxaki ezithile. Ukuba i-'DataNemen Rar Inkqubo yokulungisa iyasilela ukulungisa ifayile kwezinye iimeko zama ukuyilungisa kwenye isikhombisi _ isikhombisi kwi-flash yangaphandle okanye kwi-hard drive sihambisa iziphumo ezilungileyo kum. Kungokwemvelo kuphela ukuba ndiyenze le nto, most yexesha isebenza ngokugqibeleleyo.
ILiverpool. I-UK Sep 6th, 2014
Ndingavuya kakhulu kukushiya ukubuyela umva ngokubhekisele kuthethathethwano oluqinisekileyo lwemveliso yakho _ ezinye iingcebiso malunga nokusilela kwe-'DathaNewmen ' Rar Ukulungisa 'inkqubo yokulungisa rar ifayile. Ndifumanise ukuba xa oku kusenzeka, impumelelo yokulungisa ifayile ekuthethwa ngayo ibisoloko ifezekiswa ngokuyihambisa kwesinye isikhombisi kwaye iphinda isebenze apho _ ngesiqhelo kwi-flash yangaphandle okanye kwi-hard drive.
Ukuba ufuna ukuxhasa ukuvavanywa kwam kwemveliso ngayo nayiphi na inkcukacha zam, ungamisela umda kwingingqi _ 'United Kingdom'. Enkosi
Eunited Kingdom Sep 6th, 2014
Eunited States Sep 16th, 2015
IHouston, TX, e-USA ngoMeyi 23, 2018
ENaperville, IL, e-USA Ngomhla we-4, 2018
Isixhobo sakho sesona silungileyo ndakwazi ukulungisa ifayile yokufikelela eyunivesithi ukuze isetyenziselwe umntu kwaye ndiyabonga
Umphathi wenethiwekhi kaRichard Fixsa
I-Santo Domingo, kwiRiphabhlikhi yaseDominican nge-30 ka-Disemba 2018
Inkqubo yakho ibonakala isebenza ngokugqibeleleyo njengoko bendikwazi ukufikelela kwiifayile
kwiWindows Explorer okanye inkqubo yogcino.
Kwakhona, enkosi ngoncedo lwakho kule nkqubo kwaye ndiza kuyenza
Ostreliya ngoJan 17th, 2019
Ankara, ETurkey Jan 29th, 2019
Isebenze kakuhle! Onke amagama am kunye nedatha yam (ekunokwenzeka ukuba inzima kakhulu) yokujonga kwakhona ngoku ibuyile! ENKOSI!! Ngexesha lasehlotyeni bendinethuba lokusebenza kwizinto, kodwa thina starNdibuyele esikolweni kungekudala kwaye ndibambeke kakhulu ekusebenzeni ngokomzimba kunakwikhompyuter, kwaye andinalo ixesha (okanye intliziyo) lokuhlala phantsi ndiphinde ndingene KUMASHUMI AMALUNGU ASIXHENXE NAMASHUMI AMABINI anesithoba amabinzana ebhayoloji, iinkcazo kunye izingqinisiso! Ndaye ndagula esiswini kwithemba.
Ndiyathemba ukuba uphumle kamnandi evekini, kwaye uyaphumla kwaye uyonwabele impelaveki!
UKristi Rankin Utitshala
IBrownwood, eTexas, e-USA nge-13 Agasti 2014
EMantla eVancouver, BC, Canada ngo-Novemba 1, 2015
IHouston, TX, e-USA ngo-Novemba 1, 2015
Isixhobo sokulungisa i-Excel sikwazile ukukhupha yonke idatha yokubhaliweyo kwiifayile ezi-2 ezonakeleyo ze-Excel ezazivulekile kwaye zigcinwa xa ndinengozi ye-PC. Nangona kunjalo, isixhobo asinakho ukubuyisa yonke into ngayo yonke ifomathi (isibindi, imibala, njlost kunye nesiqingatha seefomula (ikakhulu ezintsonkothileyo ezidibanisa amaphepha). Apho bekukho iingxaki ezinokubakho, isixhobo sinciphise iphepha lokusebenzela esele likhona kwiimakhishithi ezongezelelweyo ukuze wazi ukuba ungajonga phi na ilahleko-umbono olungileyo. Ngokubanzi isiphumo esoyikisayo njengoko idatha yayiyeyona ndawo kunzima ukuyibuyisela kumthombo wokuqala. Enye yeefayile yayixutywe kakubi kangangokuba ayinakhutshelwa, ivulwe (okanye icinywe!) Ngayo nayiphi na inkqubo ye-MS! Ngokubanzi isixhobo sindisindisile malunga nomsebenzi weeveki. Kuthathe ixesha elingaphantsi kosuku ukubuyisela iifayile esiqhelweni ngokuphinda ukufomatha kwinguqulelo yefayile endala kakhulu kwaye ujonge idatha. Qaphela abasebenzisi, ukuba isixhobo kubonakala ngathi simisiwe, yiba nomonde, kuthathe phantse iyure enye ukusombulula ifayile enzima ngaphambi kokuba starukwenza nantoni na
EMelbourne, e-Australia ngoJanuwari nge-1, ngo-2017
I-Disk Image yagqwesa ezinye iinkqubo ezintathu zobuchwephesha ezingaphumelelanga ukwenza umfanekiso we-ISO-le yasebenza ngokugqibeleleyo. Ngelixa ingenako ukwaziswa ngokusuka kwi-USB kwaye kufuneka iqhutywe isuka kwi-OS esebenzayo, yayikhawuleza, i-1TB ngaphezulu nje kweeyure ezi-2 ukuba idibane, kwaye yabuyiselwa ngokungenasiphako. Ngamandla okwenza kwayo, ukutyeba, kunye nenkxaso entle abayibonisileyo, ndingacebisa isoftware yakhe nakubani na osweleyo.
UWayne Rice uthathe umhlala-phantsi
BostKwi, MA, e-USA ngoJanuwari 25, 2017